काठमाडौं ।अहिलेको समय नै सूचना र संचारको हो । हरेक दिन स्वदेश र विदेशमा के भयो भन्ने चिन्ता सबैलाई हुनु स्वाभाविक नै हो । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हरेक सूचना र जानकारी केन्द्रबिन्दु डटकममार्फत दिनभर अपडेट गर्दै आएका छौं । कसरी नयाँ सूचना छिटो दिने भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।यतिबेला देश विदेशमै मानवीय अस्तित्व नै समाप्त हुने महासंकट आइपरेको छ । सबैलाई कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चुनौती देखिएको संकटका समयमा सूचना र जानकारीको ठूलो महत्व हुन्छ ।यसकै लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज अनलाइन टिभीमार्फत हामीले नियमित बुलेटिन पनि प्रशारण गर्दै आएका छौं । हामीले देश दुनियाँको दिनभरको खबर प्रस्तुत गर्ने हेतुले केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस पनि सुरू गरेका छौं ।आज पनि हामीले हरेक दिन जस्तो समाचार सामग्री लिएर आएका छौं । आज दिनभर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के कस्ता समाचारहरु सार्वजनिक भए त ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस । पूरा भिडियो हेरिसकेपछि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा पनि गरेका छौं ।https://youtu.be/labGZ2g1MrA?list=UUPEwoZthpr3YZzrvlowpqgw
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार १८:३५
आज पनि हामीले हरेक दिन जस्तो समाचार सामग्री लिएर आएका छौं । आज दिनभर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के कस्ता समाचारहरु सार्वजनिक भए त ? प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस । पूरा भिडियो हेरिसकेपछि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा पनि गरेका छौं ।
Prevघटनालाई राजनीतिक संज्ञा नदिन नेकपाको आग्रह
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिकNext